🥇 ▷ U adeegso Automator si aad u abuurto galka daabacaadda otomaatig ah ✅
U adeegso Automator si aad u abuurto galka daabacaadda otomaatig ah
Codsiga Gawaarida Dhanka iOS waa guul waxaana laga yaabaa inaan u aragno inay si buuxda ugu biirtay noocyada mustaqbalka ee macOS. Xitaa sidaas Nidaamka hawlgalka ee kumbuyuutarradeenna Mac, wuxuu horay u leeyahay sanado badan, oo leh nidaam otomatik ah kaas oo lagu sameeyo ficillo badan oo loo yaqaan Automator.
Dhawr jeer ayaa waxaan ka wada hadalnay faa iidooyinka barnaamijkaan, iyo tan ugu muhiimsan, oo ku saabsan sida loo istcimaalo loona xaqiijiyo kartideeda oo buuxda. Xaqiiqdii, lammaaneheenna Pedro Aznar ayaa dhowaan na baray sida loo adeegsado Automator-ka si loo abuuro fayl lagu cabbiro laguna beddelo qaabka sawirradeenna.
Maanta iyo raacitaanka isla safka Waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo fayl daabacan otomaatig ah adoo isticmaalaya Automator. Haa, waxaan ku jirnaa xilli buuxa ”warqad la’aan“, laakiin hadda oo aan si buuxda ugu laabaneyno fasalka ama shaqada, waxaa lagama maarmaan ah in la daabaco waraaqaha, waraaqaha iyo dukumiintiyada kale.
Sida loo sameeyo fayl daabacan oo otomaatig ah oo leh Automator
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan ka sameysanno fayl gudaha xafiisyadeena oo aan ugu yeeri doonno “Daabac” (ama waxaad rabto).
Ka dib markaan abuurno galka desktop-ka waxaan furi doonaa “Automator” ka xulashooyinka soo muuqana waxaan dooran doonaa “Falka Falka”.
Guji halka hoose ee u muuqata midigta sare dooro faylka aan ku abuurnay tallaabada koowaad (midka aan ugu magacdarnay “Daabac”).
Hadda waxaan u isticmaalnaa mashiinka raadinta Automator-ka waxaanna ku qorna “Daabac” iyo dhammaan waxyaalaha soo baxa waxaan u jiidannaa midka loo yaqaan “Daabashada Waxyaabaha Soo Raadi” ee midigta
Hadda waa ku filan in aan ka doorano daabacaheenna hoos-u-dejinta oo aan u badbaadino ficilka Taliska (⌘) + S ama dariiqa Faylka> Badbaadi.
Sida wakhtigan xaadirka ah, dukumenti kasta, sawir ama fayl aan ku jiidno ama geyno faylkaas, Si otomaatig ah ayey u daabacaysaa.
Kubad dheeri ah: Waad uga adeegsan kartaa iPhone ama iPad adiga oo ugu mahadcelinaya iCloud Drive.
Haddii aad tahay isticmaale ‘iCloud’ oo aad uga tagto “Daabac” galka desktop desktop kombiyuutarkaaga Mac, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa iPhone ama iPad si aad ugu daabacato meel fog.
Si fudud uga hel kombuyutarkaaga iCloud Drive> Desktop-ka oo ku dheji dukumiinti kasta, sawir ama fayl galay faylka “daabac”, si markaa dokumentiga si otomaatig ah loogu daabaco daabacaadeena oo loo diyaariyo markii aan u baahanahay.
Wadaag Isticmaal Automator si aad u abuurto galka daabacan otomaatig ah